नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : एमाले भित्र ओली र माधव गुटको भाँड भैलो, अर्को सरकार बनाउन एमाले, काँग्रेस, जसपा र माओवादीको फोहोरी कसरत सुरु, प्रधानमन्त्री र मन्त्री पाउन हानथाप, भस्मासुर प्रचण्ड फेरी पनि सफल !
एमाले भित्र ओली र माधव गुटको भाँड भैलो, अर्को सरकार बनाउन एमाले, काँग्रेस, जसपा र माओवादीको फोहोरी कसरत सुरु, प्रधानमन्त्री र मन्त्री पाउन हानथाप, भस्मासुर प्रचण्ड फेरी पनि सफल !
काठमाडौं । कहिं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा ! यही उखान चरितार्थ भएको छ नेपालमा । अहिले नेपालमा २०५२ साल पछाडि जस्तै सरकार गिराउने, बनाउने, टिकाउने खेलहरु शुरु भएका छन । रात रहे अग्राख पलाउँछ भने झैं भोली बिहान उठ्दा के भैसक्ने हो भन्न मुस्किल पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तै फोहोरी राजनीतिका बिच
एमालेको दशौं महाधिवेशन आगामी मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो । बैठकमा माधव नेपाल पक्ष भने सहभागी थिएन । पुनःस्थापित नेकपा एमालेको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक माधव नेपाल पक्षले थाहै नपाइ महत्वपूर्ण निर्णयसहित
टुंगिएको छ । बैठकले महाधिवेशनको मिति तोक्नुका साथै नेताहरूको जिम्मेवारी समेत तोकेको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकले विधान संशोधन गरि सत्तरी वर्षे उमेर हद लगायत संविधानमा बाझिने कतिपय प्रावधानहरु हटाएको छ ।
यसै बिच एमालेको माधव नेपालपक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले आज पार्टीको बालुवाटारमा भएको बैठकले गरेका निर्णयहरुलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एक नेताका अनुसार माथिदेखि तलसम्म समानान्तर कमिटी बनाएर अघि बढ्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
ओलीले बोलाएको केन्द्रीय समितिको विशेष बैठकले पार्टीमा नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुका साथै पूर्वमाओवादीका २३ नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरेको थियो । उक्त निर्णयलगत्तै बसेको नेपाल समूहको बैठकले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय लिएको हो ।
चैतको पहिला साता समानान्तर कमिटीहरु घोषणा गर्ने निर्णय भएको स्रोतले बतायो । साथै शनिबार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएर थप छलफल गर्ने समझदारी पनि भएको छ ।
‘ओलीले यस्तै गतिविधि जारी राखेमा बृहद भेला बोलाएर औपचारिक विभाजन गर्नेसम्मको रणनीति बनाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
उता पुन:स्थापित नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बैठक डाकेर गरेका निर्णयहरुप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यो कदमले ओलीसँग मिल्ने सम्भावना समाप्त भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
गौतमलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस संयोजक विश्वमणि सुवेदीले भने, ‘केपी ओलीसँग मिल्ने र उहाँसँगै जाने सम्भावना अब रहेन ।’
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विभाजन उत्पन्न भएयता गौतमले एकताका लागि अभियान सञ्चालन गरेका थिए ।
अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि उनले एमालेमा ओलीले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने मत राखेका थिए । तर, ओलीले आज माधव नेपाल पक्षलाई थाहा नदिइकन पार्टीकाे जिम्मेवारी हेरफेर र केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेपछि गौतमको असन्तोष सार्वजनिक भएको हो ।
प्राप्त एक अर्को समाचार अनुसार नेपाली कांग्रेसले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमको विरुद्धमा उभिएका राजनीतिक शक्तिबीच गठबन्धन प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस भएकोले राजनीतिक निकासको खाका कांग्रेसले नै ल्याउनुपर्ने जसपा नेताहरुको भनाइ थियो । सो क्रममा कांग्रेस नेताहरुले माओवादीसँग छलफल गरेपछि संयुक्त छलफल गरेर जान सकिने बताएका थिए । नेपाल प्रेसका अनुसार एमालेइतर गठबन्धन बनाउने दिशामा छलफल सकारात्मक भएको बैठकमा सहभागी कांग्रेस पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले बताए ।
प्राप्त अझै अर्को समाचार अनुसार सत्तारोहणका लागि प्रमुख पार्टीहरुसँग संवादमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले आज बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा अब प्रधानमन्त्रीमै दावी पेश गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । पार्टीले संसदीय दलको नेता भने चयन गर्न सकेको छैन ।
तपाईंहरुलाई प्रधानमन्त्रीको समेत अफर छ भन्ने कुरा के हो ? भन्ने प्रश्नमा ठाकुरले मिडियाबाटै यो कुरा सुनेको भन्दै पन्छाए नेपाल प्रेसले लेखेको छ ।